Philips Sonic Electric Toothbrush HX9372/04 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Sonic Electric Toothbrush HX9372/04
Philips Sonic Electric Toothbrush HX9372/04
Sonicare’s best whitening in our most elegant Philips Sonicare electric toothbrush. Switch to Sonicare. ဖြူစင်လှပတဲ့သွားအလှပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ ကူညီပေးမဲ့ Philips Sonicare DiamondClean ဟာ Philips မှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Sonicare လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံတွေထဲက အကောင်းဆုံးနဲ့အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံဖြစ်ပါတယ်။ သွားတိုက်တံမှာ သိပ်သည်းစွာတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် သွားပွတ်တံအမျှင်တွေက ပုံမှန်လက်ကိုင်သွားတိုက်တံထက်ဘက်တီးရီယားတွေကို ခုနစ်ဆ... [Learn more]
Brand: PHILIPSSKU: 71465N/ASee more: New Arrivals, Philips, Products, ShopFilter by:
Sonicare’s best whitening in our most elegant Philips Sonicare electric toothbrush. Switch to Sonicare.
ဖြူစင်လှပတဲ့သွားအလှပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ ကူညီပေးမဲ့ Philips Sonicare DiamondClean ဟာ Philips မှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Sonicare လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံတွေထဲက အကောင်းဆုံးနဲ့အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံဖြစ်ပါတယ်။ သွားတိုက်တံမှာ သိပ်သည်းစွာတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် သွားပွတ်တံအမျှင်တွေက ပုံမှန်လက်ကိုင်သွားတိုက်တံထက်ဘက်တီးရီယားတွေကို ခုနစ်ဆ ပိုမို သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ DiamondClean သွားတိုက်တံခေါင်းကမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ အစွန်းအထင်းတွေကို ထိရောက်စွာ ချေးချွတ်သန့်စင်ပေးမှာဖြစ်ပြီး Clean Mode နဲ့တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် နှစ်မိနစ်ကြာ မှန်မှန် သွားတိုက်ပေးမယ်ဆိုပါက တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ယခင်ကထက်နှစ်ဆပိုမိုဖြူစင်လှပလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ သွားနဲ့သွားဖုံးကြားက စားကြွင်းစားကျန်နဲ့ဘက်တီးရီယားတွေကို သာမန်သွားတိုက်တံထက် ခုနစ်ဆ ပိုမိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်ပြီးသွားနဲ့သွားဖုံးကြားကိုလည်း ငြင်သာစွာသန့်စင်ပေးမှာ ဖြစ်တာကြောင့်သွားဖုံးထိခိုက်သွေးယိုမှုတွေမရှိတော့ဘဲ နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ ပိုမိုကျန်းမာတဲ့ ခံတွင်းကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ USB ပါတဲ့ အိတ်ဆောင်ဘူးငယ်အတွင်းသို့ သင့်ရဲ့သွားတိုက်တံကိုထည့်သွင်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီး အားသွင်းလိုပါက Laptop သို့မဟုတ် Wall Socket နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးအားသွင်းလိုက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာဆိုရင်တော့ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Charger ဖန်ခွက်ကလေးထဲကိုထည့်သွင်းထားလိုက်ရုံနဲ့ အလွယ်တကူ အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားအပြည့်တစ်ခါသွင်းထားပြီးနှစ်ပတ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သွားဆရာဝန်များ အကြံပြုထားတဲ့ သွားတိုက်ချိန်နှစ်မိနစ်အတိုင်းအတိအကျဖြစ်အောင် သတိပေးတဲ့ စနစ်တွေကို ထည့်သွင်းထားပြီး စက္ကန့်သုံးဆယ်ကြာချိန်တိုင်းမှာခံတွင်းတစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့ကိုလည်း သတိပေးဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သန့်ရှင်းကျန်းမာတဲ့ခံတွင်းနဲ့ ဖြူစင်တောက်ပတဲ့အပြုံးအလှပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ဖို့ လိုအပ်သမျှလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး သွားထိန်းတပ်ထားသူ၊ သွားဖာထားသူတွေလိုသွားအလှအပ ပြုပြင်ထားသူတွေအတွက်လည်း အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
Your deluxe USB travel case doubles asacharger so you stay topped up on the go. Place your toothbrush in the case and connect to your laptop or plug intoawall socket. Also includesabrush head holder for extra hygiene when traveling. As for charging at home, our sleek charger glass fits stylishly into your bathroom and doubles asaglass for rinsing after brushing.
Total price:K435,000 K418,200
This item: Philips Sonic Electric Toothbrush HX9372/04 K339,000